चोरको हातको साँचो र ईमान भएको चोर
सदन प्रस्ताव र माओवादी
सानै छँदा सुनेको थिँए “चोरको हातमा साँचो दिएमा ढुकुटी सुरक्षीत हुन्छ”। वास्तबमा आफ्नो हातमा साँचो राखेपछी धनमाल जे जसरी हराए पनि दोष आफैमा आउने भएकाले हातमा साँचो राखेपछी चोरको हालत खराब हुदोँ होला । आफूले चोर्ने त परे जाओस अरु कसैले सो ढुकुटी खोले मात्रै पनि दोषी हुनु पर्ने हुनाले पुरानो जमानामा चिनेको चोरलाई ढुकुटीको साँचो दिईन्थ्यो रे अनी चोरले पनि त्यो धनमालको सुरक्षा पुलिसले भन्दा पनि राम्रो संग गर्थ्यो रे ।
यस्ता स-साना प्रयोग मेरो आफ्नै घरमा र अफिसमा पनि एक दुई चोटी गरिएको थियो र सफल नै भएका हुन । तपाईको घर कार्यालयमा पनि कहिले काहि साना तिना सामानहरु हराउने गरेका छन भने शंका लागेको व्यक्तीलाई सुरक्षाको जिम्मा दिनुहोस सर-सामान हराउन ठ्‍‌याक्कै रोकिने छन ।
तर भनिन्छ नी चोरको पनि आफ्नो “ईमान” हुन्छ र उ पनि केहि स्व-निर्मीत नियम भित्र रहेर मात्रै आफ्नो कामलाई अन्जाम दिन्छ । त्यसो त ‘चोर’ र ‘ईमान’ भनेको अत्यन्तै विपरित ध्रुबका पाटाहरु हुन र कहिले काहि म आफै पनि सोच्थेँ “के चोरको पनि ईमान हुन्छ त?”
अरुले दुख गरेर कमाएको धनमाल आधा रातमा भित्ता फोरेर लानेको के ईमान होला र?, औषधि किन्न हिडेको मान्छेको बिच सडकमा पाकेट मार्नेको के ईमान होला र ? हाई वे मा चल्ने गाडिलाई रोकेर हतियार देखाई लुटनेको के ईमान होला र ? । तर साँचो कुरा के पनि हो भने आधा रातमा भित्ता फोर्नेलाई चौकिदारीको काम दिएमा भित्ता फूटन बन्द हुन्छ। पाकेट मारलाई नै रखवालीको जिम्मा दिए खल्ती सुरक्षित हुन्छ । अनि बस लुटने समुहलाई सुरक्षाको जिम्मा दिए पछि आफूलाई छिपाउन नसकिने भएकाले उसले पनि लुट पाट छोड्छ ।
त्यस्तै प्रयोगको सिलसिलामा केहि समय अगाडी नेपालमा यौटा ठुलो र राष्ट्रिय स्तरको प्रयोग भयो –जंलमा बसेर उत्पात मच्चाई रहेका माओबादिलाई पहिला संसद हुदै सरकारमा ल्याईयो ।
सोच भने त्यहि थियो “चोरको हातमा साँचो दिएमा ढुकुटी सुरक्षीत हुन्छ” तर अपसोच!!!!! स-साना प्रयोगमा अचुक हुने यो प्रयोग राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगमा असफल भयो । न त माओबादीले स्वदेशी र विदेशीहरुसंग डर त्रास र धम्किको भरमा चन्दा उठाउन छाडे, न त आफुलाई चित्त नबुझेको मान्छेलाई कुट पीट गर्न कम गरे । अनी केहि समय अघि मात्रै सार्बजनीक गरीएको पत्रकार वीरेन्द्रकुमार साहको हत्या को खबरले भने ठुलो स्तरमा यो प्रयोग सत प्रतिशत असफल भएको प्रमाणीत गरिसक्यो ।
१२ हजार को हत्या, बैक डकैती देखि लिएर सैयौ अपहरण, पासविक यातना सबै भुलेर नेपालीहरुले माओबादिलाई माफ मात्रै गरेनन् सांसद र मन्त्रि जस्तो पदमा पुर्‍याएर सम्मान पनि दिए तर ती सबै सदाचार र सम्मानको बदलामा माओबादि अझै पनि हिंसक बाटोमा हिडनुले उ चोरमा पनि “ईमान” नभएको चाँहि चोर हो भनेर देखाईसक्यो ।
धेरै सोचेँ, के चोरको हातमा साँचो दिएमा ढुकुटी सुरक्षीत हुन्छ त ? “हुन्छ” र “हुदैन” भन्ने बिभिन्न तर्क आए र यो उखान नै गलत हो कि भन्ने पनि लाग्यो । अन्तमा लाग्दै छ उखान सहि छ तर “चोर” भने “ईमान” भएको हुनु पर्छ ।
तपाईहरुलाई के लाग्छ त?
चोरको धर्ममा अडिग हुने चोर भएको भए, चोरका बारेमा युगौँदेखि बनाइएका उखानको पनि सार्थकता हुन्थ्यो होला तर अपशोस अहिलेका चोरहरूमा त्यो धर्म र इमान पनि बाँकि रहेन !
सायद यो चोरलाई चोरी गर्नु र बेइमान पनि रहनुमा नै आनन्द आउँछ किनभने जिम्मेवारीवोध हुनका लगि मस्तिष्कको परिधी फराकिलो हुनपर्छ ।
कुरा सही लाग्यो ।
Yeah what you have written is good, that proves that maoist are worst then thoese thiefs, pickpocketers and dacoits. When we will have some good characters People in parliment